Ungayakha kanjani uhlu oluphezulu lwe-backlink uhlu oluqhuba ucwaningo lwe-market niche?
Yonke imibono nabathengisi abahlakaniphile be-intanethi bafuna izinhlu ze-backlink eziphezulu ukuze zithuthukise isikhundla sewebsite futhi zithuthukise inzuzo yebhizinisi le-intanethi. Kunezindlela ezahlukene zokuthola ijusi lokuxhumanisa kusayithi lakho. Noma kunjalo, akubona bonke abonakala bethembekile futhi banengqondo. Namuhla sizokwabelana nawe eminye imithombo engcono kakhulu yokwakha isixhumanisi. Ngokulandela lo mhlahlandlela, uzokwazi ukwakha uhlu lwe-backlink oluphezulu futhi uphakamise igunya lakho emehlweni enjini.
Izindlela zokuthola uhlu lwe-backlinks eliphezulu
Bonke abanikazi bewebhusayithi noma ngabe indawo encane yebhizinisi noma enkulu yokuhweba efana nokukhombisa ubufakazi bokuthengiswa kwamakhasimende abo njengendlela ephelele yokuphakamisa idumela lomkhiqizo nokusiza izivakashi ezintsha zamasayithi ukwenza isinqumo esifanele sokuthenga - temperature and humidity monitor. Yingakho uma uneliseke ngokuphelele ngomkhiqizo noma isevisi oyisebenzisayo, cabanga ukuthumela ubufakazi kulo. Ukukuqinisekisa njengekhasimende langempela, izitolo ze-intanethi namawebhusayithi ngokuvamile zifaka i-backlink kusayithi lakho kuwe ngaphandle kokuthi ubabuze ngakho.
Ngakho njengendlela ehlukile ungaba ikhasimende lamanye imithombo yewebhu ehloniphekile ukuze uthole ezinye izixhumanisi zobufakazi ezivela kubo.
Hlola amathuba amasha wokuxhumanisa okuvela kumabhulogi amahle
Amasu wokwakha ama-Spammy afika emlandweni. Namuhla, ukudala uhlu oluphezulu lwe-backlinks, udinga ukusebenzisa ukuxhumana kwe-imeyili ukwakha ama-backlink quality. Okokuqala, udinga ukuthola abantu abalungile ukuze bafinyelele kuwo. Indlela elula kakhulu yokwenza ukuthola uhlu lwamabhulogi amahle kakhulu. Kuzinhlu ezinjalo, ungabona abalingani bakho bebhizinisi abangase bakwazi ukubeka ubuhlobo obuhle nabo. Ukuze uthole abalingani abaphelele, ungakwazi nje ukufaka imibuzo elandelayo ebhokisini lokusesha le-Google - "okungcono (isihloko sakho) amabhulogi wonyaka," "engikuthandayo (isihloko sakho) amabhulogu," "uhlu (isihloko sakho) amabhulogi ukuze ufunde. "Finyelela lawa ma-blogs bese uphuma ngemuva kwe-backlink yakho efanele.
Ukubuyekezwa kwe-Blogger kungaletha inani lokukhuthazwa kwebhizinisi lakho. Uma uthengisa okuthile okuyigugu futhi kuyigugu kubantu, ungakwazi ukuyivula kalula ukuthi ibe yizinto ezisezingeni eliphezulu ze-backlinks eliphezulu. Konke okudingayo ukuhlinzeka ngemithonya yakho yemakethe yemakethe ngemikhiqizo noma amasevisi wakho mahhala. Bayokwenza ukubuyekezwa kwekhwalithi kwimikhiqizo yakho kumbhalo wezithombe noma obonwayo bese wabelana ngayo nabalandeli babo, beqondisa amakhasimende amasha angakhona kwisayithi lakho.
Xhumanisa ama-roundups noma okuthunyelwe kwamabhulogi nsuku zonke, onke amasonto onke. Ungathola isixhumanisi se-roundups ku-niche yakho yemakethe efaka imibuzo elandelayo ebhokisini lokusesha le-Google - "igama lakho elingukhiye" + "isixhumanisi sokuhlanganisa"; "Igama lakho elingukhiye" + roundup; "Igama lakho elingukhiye" + "okungcono kakhulu," nokunye nokunye. Esikhathini esilandelayo, thuthukisa okuqukethwe kwakho kumuntu ogijima okunye okufanelekile kumigubhu yebhizinisi lakho.